ပွင့်လင်း, သံမဏိလမ်းလျှောက်: စကားလုံးများ၏ဖွဲ့စည်းမှု disassemble ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ပွင့်လင်း, သံမဏိလမ်းလျှောက်: စကားလုံးများ၏ဖွဲ့စည်းမှု disassemble ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကြိယာ၏တင်းမာနေအတိတ်ကြိယာသံမဏိဖွဲ့စည်းသည်နှင့်အဆုံးကတညျးဖြစ်လာသည်: သံမဏိ-သံမဏိ။ ဒါ့အပြင်ဖွဲ့စည်းနောက်ဆက် -L- မီးမောင်းထိုးပြ။ Cognates Staten ရပ်-ကျဆင်းသွားနောက်ကွယ်မှ-ရပ်တည်ချက်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့မှန် CT-အမြစ်ကြောင်းရှာပါ။ လည်းကျနော်တို့ကကြိယာနောက်ဆက် -A- ရှိသည်။
ကျနော်တို့မှန် CT-A-L-ငါ (အမြစ်နောက်ဆက်နောက်ဆက်-အဆုံး), နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို STA- ၏အခြေခံရရှိရန်။
ပွင့်လင်းပွင့်လင်းပွင့်လင်း: Open ကိုစိတ်နာမဝိသေသနဟာဆာပအများကိန်းအတွက်ရပ်တည်။ -YMI အဆုံးသတ်ရတတ်ပါတယ်။ Cognate စကားလုံးများ: Open-Open-အနီးကပ်ရပ်တန့်ရန်။ ကျနော်တို့စကားလုံး -KRYT- ၏အမြစ်ကြောင်းရှာပါ။ ကျနော်တို့ကရှေ့ဆက် RT- ၏အမြစ်ကိုရှာဖွေခြင်းမပြုမီ။
RT-မိုးလုံလေလုံ-ပါပဲ (ရှေ့ဆက်-အမြစ်-အဆုံး), နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို OTKRYT- ၏အခြေခံရယူပါ။
နင်းရအရေးကြီးသောကြိယာပု infinitive နင်းခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ ကြိယာ၏အဆုံး -TE ပါလိမ့်မယ်: အဆင့်-Step, အမြစ်စကားလုံးဖွစျလိမျ့မညျ: အဆင့်-အဆင့်။ အမြစ် step- ကြောင်းကိုကျနော်တို့ကိုရှာပါ။ -A- ကြိယာနောက်ဆက်နှင့်နောက်ဆက်ရအရေးကြီးသော -Y- နေဆဲဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ရ: အဆင့်-A-J-TE (အမြစ်နောက်ဆက်နောက်ဆက်-အဆုံး), စကားတော်၏အခြေခံ: SHAGA- ။
ကရှေ့ဆက်, အမြစ်, နောက်ဆက်နှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်၏အဆုံးခွဲဝေချထားပေးရန်ဖို့ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်စကားလုံးများကိုထွက်လုပ်ပါ။ သံမဏိ consoles စအမြစ်နှင့်အဆုံးဖြစ်လာမရ, အခြေခံအုတ်မြစ်စတင်ခဲ့သည်။ open-ထိပ်တန်းဖုံးလွှမ်းအမြစ်ကနေ box ကိုအဘယ်သူမျှမနောက်ဆက်ပါပဲအဆုံးသတ်လည်းမရှိ, ခြေရင်းပွင့်လင်း။ နင်း consoles စမျှအမြစ်ခြေလှမ်းသည်နောက်ဆက် a, b, t ကို,f။ , ခြေလှမ်းများ၏အခြေစိုက်စခန်း။
သံမဏိ, သံမဏိ, သံမဏိ။ သငျသညျမွငျနိုငျသောကြောင့်အမှု၌ -and- လိမ့်မည်, နောက်ဆုံးတွင်၏အမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အတူတူပင်အမြစ်ကနေစကားလုံးကိုရွေးပါ: ဖမ်းမိ, ရပ်တန့်, ထလေ၏။ ဒါဟာကျွန်တော်သည်ဤစကား၌သာအမြစ် -st- ရွေးနိုင်သည်ထွက်လှည့်။ အဆိုပါနောက်ဆက် -a- ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဒီ morpheme အရပ်၌စကားလုံးရပ်တည်ချက်, ပြသထားတယ်။ နှင့်နောက်ဆက်အဲဒီမှာ -l- ။ စကားများ -sta- အခြေခံ။
ပွင့်လင်းပွင့်လင်းပွင့်လင်း။ ထို့ကြောင့် -and- အဆုံးသတ်။ စကားများ -otkrytym- အခြေခံ။ အမြစ် -kryt- (နီးကပ်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှု), အဆုံးသတ်ရေး -ymi- -From- ရှေ့ဆက်။
အဆင့်။ ကျောင်းအစီအစဉ်တွင် -Te- များသောအားဖြင့်အဆုံးအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ -shag- အမြစ် (ခြေလှမ်း, သေးငယ်တဲ့ခြေလှမ်း) ။ ဘေးကနောက်ဆက် -ay- ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးအပြီးကနောက်ဆက် -y-, -a- ခွဲခြားရန်မလိုအပ်ကြောင်းငါ့ထံသို့ပုံရသည်။ စကားများ -shagay- အခြေခံ။
ကိုစကားလုံး Quote ဆနျးစစျကွပါစသော staliquot;
1) ဟူသောစကားလုံး quote; staliquot; ရှေ့ဆက်ပျက်ကွက်ဖြစ်၏
2) သည်စကားလုံး Quote ၏အမြစ်; staliquot; ဒါဟာ Quote လိမ့်မည် stquot ;;
3) ဟူသောစကားလုံး quote; staliquot; နောက်ဆက်နေသောခေါင်းစဉ်: Quote; aquot; နှင့် quote; lquot ;;
4) သည်စကားလုံး Quote ၏အဆုံး; staliquot; လိမ့်မည်: Quote; iquot ;;
5) သည်စကားလုံး Quote ၏အခြေခံ; staliquot; လိမ့်မည်: Quote; staquot; ။
otkrytymiquot;; ကိုစကားလုံး Quote ဆနျးစစျကွပါစို့:
1) ဟူသောစကားလုံး quote; otkrytymiquot; ရှေ့ဆက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်: Quote; otquot ;;
2) သည်စကားလုံး Quote ၏အမြစ်; otkrytymiquot; ဒါဟာ Quote လိမ့်မည် krytquot ;;
3) ဟူသောစကားလုံး quote; otkrytymiquot; နောက်ဆက်ပျက်ကွက်ဖြစ်၏
4) သည်စကားလုံး Quote ၏အဆုံး; otkrytymiquot; လိမ့်မည်: Quote; ymiquot ;;
5) သည်စကားလုံး Quote ၏အခြေခံ; otkrytymiquot; လိမ့်မည်: Quote; otkrytquot; ။
ကိုစကားလုံး Quote ဆနျးစစျကွပါစသော shagaytequot;
1) ဟူသောစကားလုံး quote; shagaytequot; ရှေ့ဆက်ပျက်ကွက်ဖြစ်၏
2) သည်စကားလုံး Quote ၏အမြစ်; shagaytequot; ဒါဟာ Quote လိမ့်မည် shagquot ;;
3) ဟူသောစကားလုံး quote; shagaytequot; နောက်ဆက်နေသောခေါင်းစဉ်: Quote; aquot; နှင့် quote; yquot ;;
4) သည်စကားလုံး Quote ၏အဆုံး; shagaytequot; လိမ့်မည်: Quote; tequot ;;
5) သည်စကားလုံး Quote ၏အခြေခံ; shagaytequot; လိမ့်မည်: Quote; shagayquot; ။
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,334 စက္ကန့်ကျော် Generate ။